Ngaba kufuneka uthengise ngamagama aphambili ngaphandle kweVolumu yokuKhangela? | Martech Zone
Amagama aphambili lulwimi oluqhelekileyo phakathi kwethemba lakho, iwebhusayithi yakho kunye neziphumo zeinjini yokukhangela ozifumeneyo. Zibalulekile ngenxa yokufaneleka kwazo kunye nokukwazi ukuguqula. Kwindawo enjengeMartech, amagama aphambili anokubaluleka ekuqhubeni utyelelo. Kodwa kungenxa yokuba undwendwelo kunye nokuthandwa ngokubanzi ziinjongo zale bhlog.
Kwishishini lakho, utyelelo alufanele lube sisalathiso sendawo yokusebenza kwindawo yakho, kuya kufuneka ibe yeyakho guquka. Amaxesha amaninzi, amagama aphambili aguqukayo ahlukile kunalawo aqhuba ukugcwala. Uhlalutyo olwenziwe ziinkampani ezininzi zokwenza ukuba lufumanise ukuba, ngelixa inqanaba elikhulu kwivolumu ephezulu yokukhangela, igama elinye elingumlinganiso linokuqhuba amawaka otyelelo… a umsila omde ibinzana lamagama ama-3 ukuya kwayi-4 anokuqhuba uguquko oluninzi.
Kuthekani ngamagama aphambili angenasandi sokukhangela? Ngaphambi kokuba siphendule, kufuneka sichaze loo nto akukho volumu yokukhangela njengoko kuxeliwe nguGoogle. Phantse onke amagama aphambili afanelekileyo okanye ibinzana linohlobo oluthile lwevolumu… nokuba zimbalwa zokukhangela inyanga nenyanga.
Omnye wabathengi bethu ulungile kwi-Interactive-inkampani yentengiso ezisebenzelayo esebenza neenkampani ukuba zingabambi nje izikhokelo kodwa ziqhubele phambili ixabiso lomthengi ngamnye. Xa babecacisa ishishini labo kwithemba, ibinzana intengiso yobomi bamakhasimende ichaze ngokulula kunayo nayiphi na enye kolu shishino. Ngelixa ibinzana elifanelekileyo kwishishini labo, intengiso yobomi babaxhasi yayingenayo ivolumu yokukhangela xa saqala ukusebenza nabo kunyaka ophelileyo.
Khange sicebise ngeLungelo lokuyeka ukuthengisa kwelo gama elingundoqo, nangona kunjalo. Kwakuyibinzana elinyanzelekileyo elaneleyo lokuba lifanelekile kwi-brand yabo kwaye ingaba lixesha eliza kwamkelwa ngokubanzi kwixesha elizayo. Yiyo kanye le yenzekileyo. Intengiso yobomi bamakhasimende ligama elikhulayo kokubini kuthandwa nakwivolumu yokukhangela. Kukho ngoku ngaphezulu kwe-30 yokukhangela ngenyanga ngelo xesha. Kwaye ucinga ukuba ngubani olilandelayo?
Sukunciphisa umda wencoko kwindawo yakho ukuya kumagama aphambili kunye namabinzana anevolumu yokukhangela! Sebenzisa naliphi na ibinzana elingu ezifanelekileyo kwishishini lakho, nokuba liqhuba utyelelo olunye! Amathuba okuba igama eliphambili okanye ibinzana liya kuqhuba uguquko ngokunyuka ngokuhambelana kwayo… hayi ivolumu. Eyona nto ilunge kakhulu, ukuba inani lokukhangela liphantsi… ngekhe ukhuphisane ngokungangoko kuloo traffic!
tags: umthamo wegama elingundoqoamagamaOku ngokuekunene kunxibelelwano
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2012 ngo-6: 19 AM
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeengcebiso malunga namagama aphambili. Kwaye iphikisana nayo. Kum isizathu sokuba amabinzana omsila omde aqhuba uguquko ngakumbi kungenxa yokuba uchwetheza uphando oluthile, sele wenze isigqibo sokuthenga.